लकडाउनको दोस्रो दिन : मुलुकभर कहाँ के भए ?
काठमाडौँ — विश्‍वभर फैलिएको महामारी कोरना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट ब्यक्ति–ब्यक्तिबीच दूरी कायम गरी फैलन नदिन लागू गरिएको ‘लकडाउन’बुधबार दोस्रो दिन । सहरी क्षेत्रमा प्राय: सुनसान रहे भने ग्रामीण क्षेत्रमा कम प्रभाव देखिएको छ । सम्भावित जोखिमका लागि विभिन्‍न जिल्लामा क्‍वारेन्टाइन, आइसोलेसन निर्माण, विभिन्न‍ चिकित्सा सामग्री जम्मा पार्ने लगायत तयारी भइरहेको छ ।
लकडाउनलाई अधिकांश नागरिकले पालना गरे पनि केही ठाउँमा आंशिक उल्लंघन भएका छन् । लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुरक्षाकर्मीले तदारुकता देखाएका छन् । मंगलबार केही जिल्लामा उल्लंघन सेनासमेत परिचालन गरिएको छ । प्रस्तुत छ, हाम्रा संवाददाताहरुले विभिन्न‍ जिल्लाबाट पठाएका गतिविधिहरु :
ग्रामीण भेगमा लकडाउन प्रभावहीन
कोभिड–१९ संक्रमण फैलन नदिन लागू गरिएको ‘लक डाउन’ ग्रामीण भेगमा प्रभावहीन देखिएको छ । महामारीलाई बुझ्न नसक्दा ग्रामीण भेगमा स्थानीयले लकडाउनको ब्यापक उल्लङ्घन गरेका छन् । यसरी लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेमा बढी पुरुष युवा समुदाय र यातायात व्यवसायी बढी देखिएका छन् ।
‘ग्रामीण भेगमा अन्तर्राष्ट्रिय स्‍वास्थ्य विपत्तिले उत्पन्न गरेको विकराल समस्यालाई बुझ्ने तत्पराता देखिएन । खासगरी पुरुष युवा समुदाय समूहमा जम्मा हुने, चोकमा भेला भै क्यारिमबोर्ड खेल्ने, अनुमति नभएका सार्वजनिक यायातायतका साधन निर्बाध चल्ने गरेको भेटियो’ लकडाउनको प्रभाव अनुगमन गर्न पश्चिम मालिका गाउँपालिका केन्द्र दरवाङ्ग पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले भने, ‘धेरैलाई सम्झाएका छौं । कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न जानेबुझैकै समुदायबाट भएका गतिविधिले असहयोग देखियो । थप कडाई गर्नु पर्ने देखिन्छ ।’
संक्रमण रोक्न लक डाउन गरी स्थानीय प्रशासनले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा जिल्लाका ४५ वटै वडामा रहेका वडाध्यक्षसमेत ५ जना जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा वडासचिव, अन्य कर्मचारी परिचालन गरी हालै विदेशबाट फर्केका जिल्लावासीको खोजी गरी स्वास्थ्य अवस्थाको तथ्याड्ढ संकलन गरिरहेको छ । केही आफै अस्पतालको सम्पर्कमा आएका छन्, केही सेल्फ क्‍वारेन्टाइनमा रहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
संभावित परिस्थिति सामना गर्न जिल्ला तहमा पनि सक्दो तयारी भएका छन् । कोभिड–१९ रोगको लक्षण देखिएका वा आशंका गरिएका बिरामीलाई क्यारेन्टाइन/आइसोलेसनमा राख्न सदरमुकाम बेनीमा एक निजी विद्यालय प्रयोग गर्न छोडेको पुराना भवनमा कोरोना विशेष आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरिएको हो । त्यस्तै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले स्थानीय सर्वोदय माविको भवन, मालिका गाउँपालिकाले जनप्रीय मावि भवन र अन्य स्थानीय तहले पनि अनुकुल सामुदायकी भवनमा वेड राखेर क्वारेन्टाईन कक्ष बनाएका छन् ।
कालोबजारी बढेपछि गाउँपालिकाद्‍वारा तोक्यो मूल्यसूची
लकडाउनको अनुचिन फाइदा उठाई ग्रामीण भेगका पसलहरुले कालोबजारी सुरु गरेपछि दुर्गम धौलागिरि गाउँपालिकाले उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसूची कायम गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न आदेश गरको छ । गाउँपालिकाले निजी क्षेत्र उद्योग वाणिज्य संघ धौलागिरी गाउँपालिका ईकाइसँग सहकार्यमा तत्काल लागू हुनेगरी सडकको सहज पहुँच रहेको दरवाङ्गबजारबाट वस्तीसम्म दूरकोको आधारमा सामान ढुवानी लागत जोडेर मुल्यसूची कायम गरेको हो ।
कतारबाट आएकी महिला अस्पतालमा
चैत ४ गते कतारबाट नेपाल आएकी एक महिला बुधबार तुलसीपुरमा अस्पतालको सम्पर्कमा आएकी छिन् । कतारको दोहा हुँदै नेपाल आएकी एक १९ वर्षीया युवतीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि उक्त जहाजमा आएकी ती महिला अस्पताल आएकी हुन् । उनलाई दुई हप्ते निगरानीका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको आइसोलेसन कक्षमा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए ।
लकडाउन उल्लंघन गर्ने तीन पक्राउ, २५६ सवारी साधन नियन्त्रणमा
लकडाउन उल्लंघन गरेको भन्दै प्रहरीले बुधबार दाङमा तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । यसैगरी सरकारी आदेश अवज्ञा गरी चलेका २ सय ५६ सवारीसाधनलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । ७ बस, ६ ट्याक्टर, १४ ट्रक, १ जेसीबी, १३ जिपकार, ७ अटोरिक्सा, १ सय ८९ मोटरसाइकल र १९ स्कुटर गरी २ सय ५६ सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएस्पी सुमित खड्काले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी बाहिर कोही ननिस्कन आग्रह गरेको छ । अतिआबश्यक काम परे नजिकको सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरेरमात्र निस्कन आग्रह गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए । खाद्यान्न सम्बन्धी पसलहरु बिहान ६ देखि ९ बजेसम्म मात्र खोल्न अनुमति दिइएको उनले जानकारी दिए ।
भारतबाट आएकाले क्‍वारेन्टाइनमा भरिँदै
भारतमा मजदुरी गरी फर्केका १ सय ४ जनालाई जिल्लाका विभिन्न ठाउॅमा निर्माण गरिएका क्‍वारेन्टाइनमा राखिएको छ । कोभिड—१९ संभावित संक्रमित हुन सक्ने भन्दै उनीहरुलाई क्‍वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
मेडिकल सामग्रीको अभाव
संक्रमणबाट जोगिन र विरामीलाई बचाउन मेडिकल सामग्री अभाव भएको छ । पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पीपीई), सर्जिकल माक्स, एनजेजे माक्स लगायत किट बक्स र स्प्रे नभएको प्रजिअ पेमलाल लामिछानेले बताए । तालिम प्राप्त जनशक्ति अभावले पनि उपचारमा समस्या आएको छ ।
प्रहरीले लकडाउनको अवज्ञा गर्ने १ सय २९ वटा सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । बर्दियाको राजापुर, बाँसगढी, गुलरिया लगायतका ठाउॅमा चलेका सवारी साधन र चालकलाई नियन्त्रत्रणमा लिइएको हो ।
चेतावनी र सचेतना दिइँदै
लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई सदरमुकाम चरिकोटको मुख्यचोकमा रोकेर चेतावनी सचेतना दिँदै विवरण संकलन गरी पठाउन थालिएको छ । कोरोना भाइरस फैलन नदिन सरकारले लकडाउन गरे पनि बिनाकारण हिँड्डुल गर्नेलाई सातदोबाटो चोकमा प्रहरीले त्यस्तो अभियान चलाएको हो । चेतावनी, सचेतना प्रशिक्षण र विवरण संकलन गरी पठाउन थालिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेलले बताए ।
जलविद्युत् आयोजना क्षेत्र लकडाउन
जलविद्युत् आयोजनाहरुले निरन्तर कार्य सञ्चालन गरिएको भन्दै अन्य जिल्लाबाट निर्माण सामग्रीहरु ढुवानी कायम राखेपछि जिल्ला प्रशासनले रोक्ने निर्णय निर्णय गरेको छ । आयोजना क्षेत्रबाट मानिसहरु बाहिर जान र भित्रिन पूर्णत रोक लगाइएको हो । आयोजना क्षेत्रभित्र जति सामान छ त्यसैलाई उपयोग गर्ने र नयाँ सामान भित्रन रोक लगाइएको हो । प्रजिअ शर्माले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र फैलनबाट जोगाउन आयोजना क्षेत्रमा खाद्यान्न, औषधि, इन्धनबाहेकको अन्य सबै ढुवानी बन्द गर्न निर्देशन गरिएको बताए ।
अन्य बिरामीको चाप घट्यो
दैनिक तीन सय जना मानिस जचाउन आउने चरिकोट अस्पतालमा बुधबार ४५ जना बिरामीमात्रै आएका छन् । तीमध्ये पाँच जनामा ज्वरो देखिएको तर सामान्य रहेको अस्पतालका डा. विनोद दंगालले बताए ।
सैनामैनामा कोरोना अस्पताल
रुपन्देहीको सैनामैनामा कोरोना आइसोलेसन अस्पताल निर्माण हुने भएको छ । नगरको वडा–१ बनकट्टामा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालयमा कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गरिने नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बताए । 'व्यवस्थित अस्पतालका रुपमा सञ्‍चालनमा आइसकेको पद्मपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयका उपयुक्त कोठालाई नै थप सुविधा सम्पन्न बनाउँदै कोरोना विशेष अस्पताल बनाइँदैछ', उनले भने, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रादेशिक अस्पतालका विशेषज्ञ डाक्टरसहित नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखसहितको टोलीले बुधबार स्थानको निरीक्षणसमेत गरेको छ ।
कोभिड १९ प्रकोप न्यूनिकरणका लागि हलेसीस्थित जाम्बाला होटल क्‍वारेन्टाइनका लागि उपयोग गरिने भएको छ । सञ्चालकले होटल नै उपलब्ध गराएपछि ११ शय्याको क्‍वारेन्टाइन उपलब्ध गराएको हो । होटल नै क्‍वारेन्टाइनका लागि उपलब्ध गराएपछि होटल सञ्चालक निर्मल गिरीप्रति आभार व्यक्त गरिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रमुख इवन राईले बताए ।
यसबाहेक हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको ११ वटै वडामा क्‍वारेन्टाइन बनिसकेको नगरप्रमुख राईले सु्नाए । उक्त नगरपालिकामा ४५ वटा क्‍वारेन्टाइन बनेको राईले सुनाए । अपूगमा जाम्बाला होटलले अरु थप ४४ वटा कोठा उपलब्ध गराउँने नगरप्रमुख राईले सुनाए ।
यस्तै ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा पाँच दिनको तलब उपलब्ध गराउने भएको छ । आर्थिक प्रशासन प्रमुख पङ्कज आचार्यकाअनुसार गाउँपालिकामा कार्यरत ८७ जना कर्मचारी छन् ।
बिरामी बोक्न एम्बुलेन्स र जाँच्न स्‍वास्थ्यकर्मीले मानेनन्
रुघाखोकी र ज्वरोग्रस्त बेनी नगरपालिका ४ सिङ्गाकी एक १९ वर्षीया किशोरीलाई अस्पताल पुर्‍याउन स्थानीय छिमेकी र एम्बुलेन्स पीपीई समेतका सुरक्षा उपकरण नभएको भन्दै बिरामी बोक्न नमानेका हुन् । उनको चार दिनदेखि उपचार हुन सकेको छैन । बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन कोही तयार नभएपछि छिमेकीलाई सदरमुकाम पुर्‍याएर स्वास्थ्यकर्मीको प्रेस्किप्सनबिना ज्वरो र रुखाखोकीको औषधि खुवाउने तयारी भएको छ ।
नजिकको स्वास्थ्यचौकीलाई आग्रह गर्दा समेत स्वास्थ्यकर्मी पीपीई समेतका उपकरण नभएको भन्दै घरमा पुगेर सेवा दिन अस्वीकार गरेका थिए । बिरामी आफैं उठेर हिँड्न नसक्ने तथा घरका सदस्यले पनि बोकेर स्वास्थ्य संस्थासम्म बिरामी लैजान सक्ने अवस्था नभएकोले एम्बुलेन्सबाट बेनी अस्पताल पुर्‍याउन खोजिएको हो । ‘गाउँमा विपन्न परिवारकी एक किशोरी चार दिनदेखि रुखाखोकी र ज्वरोग्रस्त रहेछिन् । उनलाई अस्पताल पुर्‍याउन मानवीय सेवामा समर्पित रेडक्रससमेत अस्पतालको एम्बुलेन्स तयार भएनन्, न स्टेचरमा बोकेर स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याउन स्थानीय तयार भए’ बेनी नगरपालिका, ४ का वडाध्यक्ष गोविन्द पौडेलले भने, ‘शंकास्पद बिरामीलाई होम क्‍वारेन्टाइनमा बस भनेको स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गर्न खोजिएको हो ? घरमै मर भनेको हो ? नभए किन अस्पताल पुर्‍याउन कोही तयार भएनन् ?’
वडाध्यक्ष पौडेलले रेडक्रस र बेनी अस्पतालका एम्बुलेन्सलाई फोन गरी बिरामी लिन आउनभन्दा नमाने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बिरामी उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याइदिन गुहार मागेका थिए । प्रजिअ ज्ञाननाथ ढकालले बिरामी उद्धारगरी अस्पताल पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउन सहायक प्रजिअलाई अह्राई आफू लकडाउन प्रभावकारिता अनुगमन गर्न निक्नेलको बताए ।
क्‍वारेन्टाइनको लागि पोखरामा ४८ वेड तयार
कोभिड–१९ को मध्यनजर गर्दै पोखरामा ४८ वटा क्‍वारेन्टाइनको तयारी गरिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा विनोदविन्दु शर्माकाअनुसार मालेपाटनस्थित कृषि तालिम केन्द्रको भवनमा क्‍वारेन्टाइन तयार गरिएको हो ।
‘नदीपुरस्थित गृप्त हस्पिटलमा ५० वटा वेड क्यारेन्टाइनका लागि तयारी गर्ने अवस्थामा छौं’ नले भने, ‘एक/दुई दिनभित्र हामी तयार गरिसक्छौं ।’ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार आइसोलेसन बेडको लागि मनिपाल अस्पतालमा २ वटा र जर्नल वेड १८ वटा गरी २० वटा बनाउने गरी काम भइरहेको छ । शर्माले कास्कीका स्थानीय तहले पनि आफ्नै तरिकाले क्वारेन्टाइन बनाउने तयारीमा रहेको बताए ।
कास्कीमा थर्मलगनको समस्या रहेको डा शर्माले बताए । हालसम्म विभिन्न स्थानमा वितरण गरिएको जम्मा २५ वटा थर्मलगन र १०० वटा अभाव रहेको शर्माले बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारसंग १०० वटा थर्मलगन माग गरिएको छ ।
स्याङ्जामा ६०० वेड तयारी
स्याङ्जामा ६०० वटा क्‍वारेन्टाइनको लागि वेड तयारी गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङले अस्पतालदेखी स्थानीय तह र वडासम्म निर्माण गरिएका वेड ६ सयभन्दा बढी रहेको बताए ।
हेलो डाक्टरको लागि कोरोना भाइरसको शंका लागेमा ९८५६०५३२३९ नम्बरको मोवाइलमा फोन गर्न सकिने छ । चौबिसै घण्टा फोन गर्न सकिने र चिकित्सकले सल्लाह दिनेछन् । जिल्लाभरी १२ वटा मात्र थर्मलगन रहेको प्रजिअ कुरुम्वाङले बताए । उनकाअनुसार जिल्लाभरी १०० भन्दा बढी थर्मलगनको आवश्यक रहेका छन् । उनले जिल्लाभर १२ थान पीपीई र ६० थान मास्क रहेको बताए ।
५० जना क्‍वारेन्टाइनमा
स्याङ्जामा ५० जनालाई क्‍वारेन्टाइनमा राखिएको छ । चैत ५ मा अर्थात् मार्च १८ तारिखका दिन कोरोना पुष्टि भएकी काठमाडौंकी १९ वर्षीया युवती आएको कतार एयरवेजको फ्लाइट नम्बर क्यिुआर ६५० मा स्याङ्जाका पनि ६ जना थिए । उनीहरुको तीव्र खोजी गरी ६ जनालाई नै क्‍वारेन्टाइनमा राखिएको प्रजिअ रामबहादुर कुरुम्वाङले जानकारी दिए ।
यसैगरी विदेशबाट फर्किएर आएका २१ जनालाई वालिङ नगरपालिकाले होम क्यारेन्टाइनमा राखेको छ । नगरभित्रका विभिन्न वडाका घर/घरमा पुगेर २१ जनालाई होम क्‍वारेन्टाईनमा बस्न सुझाव दिइएको नगर प्रमुख दिलीपप्रताप खाँणले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारले गरेको लकडाउनको निर्णय कार्यान्वयन कडाई गरिएको प्रजिअ कुरुम्बाङ बताउँछन् । उनका अनुसार लकडाउनको निर्णय कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गर्नेलाई प्रशासनले कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने छ ।
एक युवक आइसोलेसनमा, १० क्‍वारेन्टाइनमा
भारतबाट आएका एक युवकलाई कोरोना आशंकामा सिन्धुली अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार सुरु गरिएको छ । कमलामाई नगरपालिका–२ अमले निवासी १९ वर्षीय ती युवालाई भारतमा हुँदा नै ज्वरो आएको र नेपाल आएपछि थप खोकी लागेपछिँ उपचारका लागि आफैं जिल्ला अस्पताल गएका थिए । ट्राभल हिस्ट्री र ज्वरोका कारण उनलाई आइसोलेसनमा राखिएको हो । उनको अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ । स्वाबको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि काठमाडौंको टेकु अस्पताल पठाइएको अस्पतालका डा. प्रशन्न राजभण्डारीले जानकारी दिए । जिल्ला अस्पतालमा जाँचका लागि आएका १० जनालाई होम क्‍वारेन्टाइनमा बस्ने गरी पठाएको छ । उनीहरु भारतबाट आएका हुन् ।
यसैबीच तीनवटा ठूला राजमार्गको सञ्जाल जोडिएको सिन्धुली लकडाउनको दोस्रो दिन सुनसान बनेको छ । राजधानी र पूर्वी तराईबाट आएका साना सवारीका कारण पहिलो दिन भने लकडाउन आंशिक उल्लघंन भएको थियो । बीपी राजमाार्ग, मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग बुधबार सुनसान बनेका छन् ।
सदरमुकाम तथा आसपासका क्षेत्रमा छिटफुट साना सवारी चले भने लामा दूरीको सवारीसाधन ठप्प भएका छन् ।
४ चीनियाँ नागरिक क्‍वारेन्टाइनमा, निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने २३ जना नियन्त्रणमा
कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनका चार नागरिक धनकुटा पुगेका छन् । गत सोमबार काठमाडौंबाट धनकुटा नगरपालिका ९ मुलघाटस्थित एक रिसोर्टमा बास बसेका उनीहरुलाई बुधबार स्वास्थ्य जाँच गरी क्‍वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
चीनियाँ लगानीमा बन्न लागेको तमोर बहुउद्देश्यीय जलाशयमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि तीन महिनाअघि नै उनीहरु नेपाल आएको प्रहरीले जनाएको छ । रिसोर्टमा बास बसेको जानकारी पाएपछि बुधबार प्रहरीको टोलीले उनीहरुलाई धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा लगि स्वास्थ्य जाँच गराएको थियो । हाललाई चीनिया नागरिक बस्दै आएको रिसोर्टमा नै क्‍वारेन्टाइन निर्माण गरी राखिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुदर्शन प्रसाद कोइराला बताए।
२३ जना पक्राउ
धनकुटा जिल्लामा बुधबारदेखि लकडाउनलाई कडाई गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबारदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने २३ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । नियन्त्रणमा लिइएकालाई प्रहरीले कोरोना भाइरसबारे जानकारी गराएर निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्ने शर्तमा छोडेको छ ।
संक्रमित युवती आएको जहाजमा चितवनका ६ यात्रु, ५ जना सम्पर्कमा
फ्रान्सबाट कतार हुँदै नेपाल आएकी एक १९ वर्षीय युवतीमा कोभिड–१९ संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि सो जाहाजमा यात्रा गर्ने चितवनका ६ जना भएको पत्ता लागेको छ । जसमध्ये पाँचजना सम्पर्कमा आएका छन् । उनीहरुलाई भरतपुरको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा राखिएको छ ।
चैत्र ४ गते फ्रान्सबाट कतार हुँदै आएकी युवतीलाई कोरोना लागेको सोमबार पुष्टि भएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले यात्रा गरेकामध्ये चितवन ठेगना भएका ६ जना भेटिएपछि खोजी गर्न चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरेको थियो । पत्र आएलगत्तै चितवन प्रहरीले खोजी तीव्र बनाएको थियो ।
सप्तरीका १८ स्थानमा २ सय १५ शय्याको क्‍वारेन्टाइन कक्ष
सप्तरीका विभिन्न १८ वटा स्थानमा २ सय १५ शय्याको क्‍वारेन्टाइन कक्ष सञ्‍चालनमा ल्याईएको छ । विभिन्न स्थानीय तह र जिल्लास्थित कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिको समन्वयमा क्‍वारेन्टाइन स्थापना गरिएको हो । अझै पनि केही स्थानीय तहले क्‍वारेन्टाइन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । सबै स्थानीय तहलाई क्‍वारेन्टाइन सञ्‍चालनमा ल्याउन आग्रह गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका प्रमुख दुनियालाल यादवले जानकारी दिए ।
बिदेशबाट आएकाको खोजी गरिँदै
सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरुले पछिल्लो १० दिनयता वैदेशिक रोजगारी र भारतबाट आएकाहरुको खोजी सुरु गरेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख यादवका अनुसार पछिल्लो १० दिनमा विभिन्न राष्ट्रबाट आएका १६ जनाको पहिचान भएको छ । उनीहरु भारतको बैंग्लोर,उडिसा र हैदरावाद तथा दुबई, कतार र साउदी अरबबाट आएका र गाउँकै रहेकाले खोजी गरी क्‍वारेन्टाइनमा ल्याउने तयारी भइरहेको यादवले बताए ।
लकडाउन उल्लंघन कार्य कायमै
संक्रमणबाट जोगिन र जोगाउन सरकारले लकडाउन गरेपछि बुधबार दोस्रो दिन पनि उल्लंघन गर्नेहरु देखिए । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सडकमा सम्झाई बुझाई गरेर फर्काउने गरे पनि विभिन्न कामको बहानामा घरबाट निस्कनेहरुको संख्या बुधबार पनि कम देखिएन । जिल्लाका प्रशासकहरु र स्थानीय तहका प्रमुखहरुले विभिन्न माध्यमबाट सर्वसाधारण सबैलाई लकडाउनको अवधिमा घरमै बस्न आग्रह गरिइरहेको छ ।
पूर्ण पालना भएन लकडाउन, २ सय सवारी साधनलाई जरिवाना, २ जना हिरासतमा
लकडाउन अवज्ञा गर्ने २ सय ५० भन्दा बढी सवारीसाधनलाई काभ्रेमा कारबाही गरिएको छ । लकडाउनको दोस्रो दिन अवज्ञा गरी चलाउने २ सय ५० भन्दा बढी सवारी साधनको चावी दिनभर नियन्त्रणमा लिई ५ सय रुपैयाँ जरिवाना लिइ छाडेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक विशाल तामाङले जानकारी दिए । सम्झाउँदा पनि विवाद गर्ने २ चालकलाई प्रहरीले हिरासतमा राखिएको छ ।
बीपी, अरनिको राजमार्ग, अन्य फिडर तथा ग्रामीण सडकमा पनि कडाई गरेको प्रहरी निरीक्षक तामाङले जानकारी दिए ।
लकडाउन अटेर गर्दै सवारी
लकडाउनमा स्थानीय कामबिना हिँडिरहेका छन् । जिप तथा मोटरसाइकल चलाएर हिँडेका छन् । मंगलबारको तुलानामा बुधबार कम हिँडेपनि नहिँडेको भनै छैन । प्रहरीलाई यात्रु सम्झाउँदैमा हैरान छ । बेंसीसहरको ठाउँ ठाउँमा नेपाल प्रहरी र बेंसीसहर नगरपालिकाको नगर प्रहरी खटिएको छ । उनीहरुलाई अटेर गरी सवारी साधन हिँडिरहेका छन् । केहीलाई मात्रै समात्न उनीहरु सफल भएका छन् । अनेक बाहाना बनाएर उनीहरु फुत्किने गरेको चोक चोकमा खटिएका प्रहरी बताउँछन् ।
प्रहरीले लकडाउन उल्लंघन गरेर सवारी चलाएको भन्दै २७ वटा सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । कतिपय सवारी साधन चलाएर बजारमा आएकाहरु मेडिकल गएको र आएकोलगायत बाहानामा छुट्ने गरेका छन् । केही प्रतिष्ठितलाई प्रहरीले छाडेको गुनासो स्थानीयको छ । ग्रामीण भेगमा मोटरसाइकल र जिप निर्बाध रुपमा चलाइएको स्थानीयले बताएका छन् ।
एम्बुलेन्स दुरुपयोग रोक्न प्रहरीको निगरानी
एम्बुलेन्समा यात्रु बोक्न लागेको भन्दै रौतहटको चन्द्रपुरस्थित ईलाका प्रहरीले बुधबारबाट निगरानीमा राखेको छ । कोभिड–१९ को सम्भावित संक्रमण रोक्न सरकारले एक सातासम्म आह्वान गरेको ‘लकडाउन’को फाइदा उठाउँदै अधिकांशले यात्रु ओसारपसार गरेको प्रहरीलाई जानकारी गराएपछि चन्द्रनिगाहपुर क्षेत्रका एम्बुलेन्सलाई निगरानीमा राखेको छ । प्रहरीले उनीहरुलाई जथाभावी नचलाउन भनेको छ ।
ईलाका प्रहरीका डिएसपी हेमबहादुर शाहीले एम्बुलेन्स दुरुपयोग रोक्न निगरानीमा राखेको बताए ।
प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ २०:१९